Federico Moccia: किताबहरु | वर्तमान साहित्य
Federico Moccia: किताबहरु
Federico Moccia किताबहरु को लागी छवि स्रोत: Pinterest
बारेमा कुरा गर्नुहोस् फेडरिको मोसिया र उनको किताबहरु यो एक लेखक जो किशोरहरु को लागी उपन्यास को बिक्री मा एक नेता भएको बाट गर्न को लागी हो। वास्तव मा, यो भनिएको छ कि यो उनीहरुको कथाहरु को लागी धन्यबाद छ कि वयस्क युवा शैली पैदा भयो, वयस्क विषयवस्तुहरु तर एक तरीकाले भनिएको छ कि किशोरहरु आफैं उनीहरु लाई "नरम" तरीका बाट सचेत थिए।
वर्षौंदेखि, Federico Moccia महान् को बीच मा आफ्नो लागी एक नाम बनाएको छ, र जब पनि उसले एउटा किताब बाहिर राखेको छ यो एक सफलता भएको छ, न केवल आफ्नो देश मा, तर विश्व को धेरै जसो मा। तर मोक्सियासँग कुन किताबहरु छन्? यो लेखक को कथा के हो? तल सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
1 फेडेरिको मोसिया को हुन्
2 Federico Moccia का किताबहरु
2.1 सागा आकाश भन्दा तीन मिटर माथि
2.2 सागा माफ गर्नुहोस् यदि मँ तिमीलाई माया भन्छु
2.3 गाथा आज रात मलाई भन्नुहोस् कि तपाइँ मलाई माया गर्नुहुन्छ
2.4 गाथा त्यो खुशी को पल
2.5 स्वतन्त्र उपन्यासहरू
फेडेरिको मोसिया को हुन्
Federico Moccia को बारे मा तपाइँलाई थाहा छ पहिलो कुरा यो हो कि उनको साँचो जोश, साहित्य उनको जीवन मा प्रवेश गर्नु अघि, टेलिभिजन र सिनेमा थियो। र यो कम को लागी हैन, यदि हामी ध्यानमा राख्छौं कि उसको बुबा ज्युसेप्पे मोकसिया, पिपोलो, फिल्म र टेलिभिजन को लागी एक पटकथा लेखक, राजनीतिज्ञ र धेरै फिल्महरु र टिभी कार्यक्रमहरु को निर्देशक हो।
सबै उनी आफ्नो बचपन सिनेमा बाट घेरिएको थियो कि उसका बुबाले उसलाई प्रेरित गर्नुभयो र देखाउनुभयो, यसैले, जब उनी काम गर्न को लागी पुरानो थिए, उनले इटालियन हास्यहरु मा एक पटकथा लेखक को रूप मा रोजे। विशेष गरी, तपाइँ s० र s० को दशक मा फिल्महरु मा उनको सन्दर्भ पाउन सक्नुहुन्छ।
उनले एटिला फ्लैगेलो डि डियो को निर्देशक को सहयोगी को रूप मा काम गर्न थाले, उनको बुबा द्वारा बनाईएको एक फिल्म।
यद्यपि, ५ बर्ष पछि उनले आफैं एक फिल्म पल्ला अल सेन्ट्रो को साथ शुरू गरे। समस्या यो हो कि उसको बुबा को सफलता उनी मा दोहोर्याइएको थिएन, र फिल्म कसैको नजरमा गयो, यति धेरै कि फेडेरिको मोकसियाले टेलिभिजन को लागी सिनेमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरे, केहि उनी पहिले नै एक बर्ष पहिले गरीरहेकी थिईन्, जहाँ उनी एक को रूप मा भाग लिईन्। तेस्रो केटाहरु को पहिलो सत्र मा पटकथा लेखक। १3he मा उहाँ निर्देशक र Colegio को पटकथा लेखक हुनुहुन्थ्यो र यो एक एक सानो धेरै सफलता थियो।
यस प्रकार, उहाँले टेलिभिजन, सफल कार्यक्रमहरु को लागी पाठ लेखन, र सिनेमा को संयोजन गर्न शुरू गर्नुभयो।
र त्यसो भए पनि, फेडेरिको मोकसियाले आफ्नो किताबहरु को लागी समय दिए। यो १ 1992 २ मा थियो जब उनले आकाशबाट तीन मिटर माथि लेख्न सके, जुन उनको पहिलो उपन्यास हुनेछ। र, धेरै लेखकहरु लाई भयो, उनी लाई कुनै पनी प्रकाशक को लागी उसलाई विश्वास गर्ने निर्णय गर्न को लागी पर्याप्त समस्या थियो। त्यसोभए उनले यसलाई एक सानो प्रकाशक संग स्वयं प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे। त्यो प्रकार को समयमा, किताब बन्द छैन, र मोक्सिया सिनेमा संग आफ्नो काम मा ध्यान केन्द्रित, फिल्म मिश्रित वर्ग 3ª ए संग सफलता बिना फेरि।
उनी टेलिभिजनमा फर्किए तर, २००४ मा, उनले यो छोड्नु परेको थियो उनको पहिलो पुस्तक प्रकाशन को १२ बर्ष पछि बाहिर खडा हुन थाल्यो। त्यो भन्न को लागी, त्यो सफलता उहाँलाई आउनुभयो, रोमन माध्यमिक विद्यालयहरु मा एक घटना भएको, र त्यहाँ बाट धेरै भाषाहरु मा अनुवाद गरीयो र यूरोप, जापान, ब्राजील जस्ता बिभिन्न देशहरुमा प्रकाशित गर्न को लागी ... उही वर्ष पुस्तक पनि सिनेमा को लागी यसको अनुकूलन, तुरुन्तै premiering, र थप उपन्यास बढावा।
अवश्य पनि, त्यो समय फेडेरिको मोसिया आफ्नो साहित्यिक पक्ष मा फर्के, र एक दोस्रो उपन्यास संग आफ्नो भाग्य कोसिस गरे, म तिमी को लागी इच्छा छ, उनको पहिलो उपन्यास को एक अगली कड़ी, र यो एक जस्तै सफलता संग, अनुकूलन शामिल।
ती दुई पुस्तकहरु मात्र Moccia घटना को शुरुवात थियो, र यो हो कि अर्को किताबहरु कि आज सम्म फेरि विजयी भयो।
Federico Moccia का किताबहरु
यदि तपाइँ पढ्न चाहानुहुन्छ Federico Moccia किताबहरु क्रम मा, तब यहाँ हामी उनीहरुलाई टिप्पणी गर्छौं ताकि तपाइँ केहि पनि याद गर्नुहुन्न। ध्यान राख्नुहोस् कि उनीहरु को विशाल बहुमत sagas बाट हो, त्यो हो, उनीहरु दुई किताबहरु को एक न्यूनतम मिलेर बनेको छ। तब उनीसँग केहि स्वतन्त्र छन्, यद्यपि उनीहरु यति धेरै परिचित छैनन्।
सागा आकाश भन्दा तीन मिटर माथि
यो धेरै किताबहरु बाट बनेको छ: "आकाश बाट तीन मिटर", "म तिमीलाई चाहन्छु", "तीन पटक तिमी", "बाबि र म"।
पछिल्लो वास्तव मा एक कहानी हो, यो एक उपन्यास हैन, तर यो कथा र पात्रहरु कि यो गाथा मा देखा पर्दछ।
उपन्यास हामीलाई साथीहरु को एक समूह संग प्रस्तुत गर्दछ, आफ्नो व्यक्तित्व र किशोरावस्था बाट वयस्कता को लागी उनीहरुको पारित संगै, संसारमा आफ्नो स्थान खोज्न को लागी। नायक शुद्ध रोमियो र जूलियट शैली मा एक प्रेम कहानी बाँच्न, तर आधुनिक।
सागा माफ गर्नुहोस् यदि मँ तिमीलाई माया भन्छु
दुई पुस्तकहरु बाट बनेको, "माफ गर्नुहोस् यदि मँ तिमीलाई माया भन्छु" र "माफ गर्नुहोस् तर म तिमीलाई विवाह गर्न चाहन्छु।" यो लेखक को सबैभन्दा ठूलो सफलता मध्ये एक थियो र सत्य यो हो कि धेरै को लागी यो उनको पहिलो उपन्यासहरु भन्दा राम्रो छ।
त्यहाँ एक तेस्रो किताब, "हताश निकी को लागी खोज" छ, तर यो स्पेनिश मा अनुवाद गरीएको छैन र श्रृंखला को मात्र प्रशंसकहरु लाई यसको अस्तित्व को बारे मा थाहा छ।
कथा एक महान उमेर को फरक र बाधाहरु लाई उनीहरु लाई अन्त मा खुसी हुन को लागी पार गर्न को लागी साथीहरु, परिवार, आदि को लागी एक जोडी को बीच प्रेम संग सम्बन्धित छ।
गाथा आज रात मलाई भन्नुहोस् कि तपाइँ मलाई माया गर्नुहुन्छ
दुई पुस्तकहरु बाट बनेको: "मलाई आज रात भन्नुहोस् कि तपाइँ मलाई माया गर्नुहुन्छ" र "तपाइँ बिना एक हजार रातहरु।"
यस मामला मा, नायक अधिक केटा, निक्को, जो भर्खरै उनको प्रेमिका द्वारा डम्प गरीएको छ र जो अचानक दुई युवा स्पेनिश महिलाहरु संग भेटिन्छन् जसको साथ उनी एक आकर्षण भन्दा बढी केहि महसुस गर्न थाल्छन्। जब सम्म उनीहरु हराउदैनन्।
गाथा त्यो खुशी को पल
दुई पुस्तकहरु बाट बनेको: "खुशी को त्यो पल" र "तपाइँ, मात्र तपाइँ।"
उपन्यास मा, उहाँले हामीलाई दुई पात्रहरु जो सामान्य बाट अलि फरक को लागी परिचय गराउनुहुन्छ, किनकि नायक संसारको सबैभन्दा धनी मानिसहरु मध्ये एक हो र केटी एक पियानो कौतुक हो। तर केहि हुन्छ कि दुबै काट्न को बाटो बनाउँछ।
हामीले उल्लेख गरिसकेका छौं, फेडेरिको मोकसियाका पुस्तकहरु मध्ये उनीसंग केहि अरु पनि छन् जो स्वतन्त्र छन्, त्यो हो, उनीहरुको सुरुवात र अन्त्य छ। यी हुन्:
पैदल। यो शायद लेखक को अनौठो उपन्यास मध्ये एक हो, किनकि हामी यो रजिस्टर को लागी प्रयोग गरीरहेका छैनौं। यो एक छोटो उपन्यास हो जसमा उनी आफ्नो बुबा को मृत्यु मा प्रतिबिम्बित छन्।
क्यारोलिना प्रेममा पर्छ। उपन्यास को नायक १४ बर्ष को हो, अरु जस्तै एक केटी। जब सम्म ऊ हाई स्कूल र पार्टीहरुमा केटीहरु को एक समूह मा सामेल हुन्छ, चुम्बन, मित्रता र परम्पराहरु र साँचो प्रेम शुरू हुन्छ।
के तपाइँ Federico Moccia द्वारा केहि पढ्नुभएको छ? तपाइँ कुन लेखक को बारे मा धेरै मनपर्छ? हामीलाई थाहा दिनु!
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » Federico Moccia: किताबहरु
जर्ज आर आर मार्टिन
एमिलियो लारा। सपनाहरु को प्रहरी को लेखक संग साक्षात्कार